Uhlelo Lwesivikelo Sombungazi Wase-China | Airbnb®
Uhlelo Lwesivikelo Lombungazi wase-China
E-China mainland, asigcini ngokuhlomisa ababungazi bezindlu nabokokuzithokozisa kuphela ukuba basebenze ngekhono, ngabodwana futhi nangempumelelo nge-Airbnb. Siphinde sisebenzisane ne-People's Insurance Company of China (PICC) ukuze sihlinzeke ngoHlelo Lokuvikelwa Kwababungazi base-China. Uhlelo luhlanganisa izinhlelo ezintathu: Umshwalense Wendlu Yombungazi wase-China, Umshwalense Wokuvikela Ababungazi base-China, kanye Nomshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa kwase-China ukuze kwenziwe inqubo yokufaka isimangalo somshwalense ibe lula, iphephe futhi ivikeleke kakhudlwana. Hlola okulandelayo ukuze ubone ukuthi uzothola hlobo luni lokuvikelwa.
Isivikelo esihlanganisa okuningi
Vikela indlu yakho nempahla ehlobene nayo, kanye nokuphepha kwezivakashi zakho kanye nomuntu oseceleni.
Ubukhulu obuvumelekile besamba
Umshwalense Wendlu Yombungazi wase-China kuze kufike ku-CNY 1,000,000
Umshwalense Wokuvikela Ababungazi base-China kuze kufike ku-CNY 5,000,000
Umshwalense Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa kwase-China kuze kufike ku-CNY 5,000,000
Iqembu lezimangalo le-PICC lihlangana ne-Sedgwick China Co.,Ltd ukuze bahlinzeke ndawonye ngamasevisi abo kuphela
Isikhungo Sesevisi Yamakhasimende se-Airbnb sinikeza izimpendulo ezihlakaniphile zemibuzo yakho kanye namasevisi adingwa umuntu ngamunye
Umshwalense Wendlu Yombungazi Wase-China
Umonakalo endaweni yakho obangelwe yizivakashi
Umonakalo empahleni yakho obangelwe yizivakashi
Umonakalo ekhaya lakho noma empahleni yakho obangelwe yisilwane sesivakashi noma leso esifuywayo (isib., inja esiza umuntu ongaboni)
Ukulahlekelwa yimali engenayo kukho konke ukubhukha ngenxa yengozi, kuze kufike emkhawulweni ophezulu ka-CNY 10,000
Okungekho ngaphansi kwesivikelo
Ukwebiwa kwemali nezibambiso (isib. amadiphozi asebhange, amasheya)
Ukuguga nokugqwala okuvamile ngenxa yokusetshenziswa
Ukulimala emzimbeni noma umonakalo wempahla yezivakashi noma yabantu abaseceleni (lezo kungenzeka zivikelwe Wumshwalense wase-China Wokuvikela Ababungazi)
Izisihla, isikhunta, njll. endlini
1. Khuluma nesivakashi sakho
Phakathi nenkathi yokuxoxisana (izinsuku ezingu-60), umbungazi angase aqale akhulumisane nesivakashi nganoma yimuphi umonakalo wempahla obangelwe ngubudedengu esebenzisa Isikhungo Sesixazululo; ungaqalisa isimangalo ngokumelene nesivakashi ngokuya kobungako bomonakalo.
Mayelana nezimangalo ezingale kwenkathi okuxoxiswene ngayo kodwa zisephakathi nenkathi yomshwalense osemthethweni (iminyaka engu-2), sicela [uchofoze lapha](/umshwalense/ufuna isimangalo?reservation_locale=cn&program_type=PICC_HOST_GUARANTEE) ukuze uthumele ngokuqondile ku-PICC.
2. Thumela isimangalo somshwalense
Uma ingxoxo ingaphumeleli, umbungazi angathumela isicelo sesimangalo ku-PICC esebenzisa Umlando Wesicelo Esikhungweni Sesixazululo; i-Airbnb izothumela isicelo sesimangalo ngasikhathi sinye ku-PICC.
3. Landelela ne-PICC
Ngemva kokubuyekeza nokufaka isimangalo, i-PICC izoxhumana nombungazi ngenkampane yangaphandle eyiphrofeshinali elungisayo ezimele (i-Sedgwick China Co.,Ltd) ukuze iqedele inqubo elandelayo yokukleyima umshwalense.
Ezicelweni ezingaphambi kuka-August 1, 2020, uma izingxoxo zingaphumeleli, zisazophroseswa yithimba le-Airbnb futhi ngeke zithunyelwe ku-PICC.
Umshwalense wase-China Wokuvikela Ababungazi
Isibopho sakho esingokomthetho sokulimala kwezivakashi noma kwabantu abaseceleni
Isibopho sakho esingokomthetho ngomonakalo wempahla yezivakashi noma yabantu abaseceleni
Ukonakala noma ukulimala komzimba ngamabomu (hhayi ngengozi)
Ukonakala kwendlu yakho noma izinto onazo (kungase kuvikelwe yi-China Host Property Insurance)
Okunye(Ukugula okunjengama-aleji, i-eczema, nesifo sokuwa, njll.)
1. Thumela isimangalo somshwalense
Gcwalisa futhi uthumele [isicelo sesimangalo](/umshuwalense/ufaka isimangalo?reservation_locale=cn) ngokususelwa emonakalweni wakho uwonke (ingozi kumelwe ukuba yenzeke ngo-August 1, 2020 noma ngemva kwalokho); i-Airbnb izoqopha ngasikhathi sinye isicelo sakho sesimangalo bese isidlulisela ku-PICC.
2. Landelela nenkampane yangaphandle elungisayo (Sedgwick China Co.,Ltd)
Ngemva kokubuyekeza nokufaka isimangalo, i-PICC izoxhumana nawe ngenkampane yangaphandle eyiphrofeshinali elungisayo ezimele (i-Sedgwick China Co.,Ltd) ukuze iqedele inqubo elandelayo yokukleyima umshwalense.
Umshwalense wase-China Wokuvikelwa Kwezokuzithokozisa
Isibopho sakho esingokomthetho sokulimala kwababambe iqhaza noma kwabantu abaseceleni
Isibopho sakho esingokomthetho ngomonakalo wempahla yabambe iqhaza noma yabantu abaseceleni
Ukulimala noma umonakalo wempahla owenziwe ngenhloso (hhayi ngengozi)
Umonakalo wempahla yombungazi, izinto ezingekho noma ezebiwe ngesikhathi somcimbi wokokuzithokozisa
Ingxenye yokokuzithokozisa ehilela indiza nezokuthutha (le ngxenye iye yafakwa emshwalensini ngezokuthutha, ezifana ne-auto insurance)
Imidlalo ekhandlayo noma eyingozi enjengokuqwala amadwala ne-bungee jumping
Gcwalisa futhi uthumele [isicelo sesimangalo](/umshwalense/ufaka isimangalo?reservation_locale=cn&program_type=PICC_EXPERIENCE_PROTECTION_INSURANCE) ngokususelwa emonakalweni wakho uwonke (ingozi kufanele ukuba yenzeke ngo-August 1, 2020, noma ngemva kwalokho); i-Airbnb izorekhoda ngasikhathi sinye isicelo sakho sesimangalo bese isidlulisela ku-PICC.
Kungani kwasungulwa Uhlelo Lwe-Airbnb Lwesivikelo Sombungazi Wase-China?
Njengenkundla yezindawo zokuhlala ehlanganyelwa nomhlaba wonke, siyikhathalela kakhulu impatho yomsebenzisi kanye nalokho okushiwo ababungazi kuwo wonke amazwe nezifundazwe. Njengoba kunezindlu ezisebenzayo ezingaphezu kwamakhulu ezinkulungwane kanye nezinkulungwane zemicimbi yokokuzithokozisa e-China mainland, kuyaphoqa kithi ukuba sihlinzeke ngomshwalense wezinga eliphakeme, isivikelo sasendaweni somshwalense owenzelwe iqembu elikhulu lababungazi bamakhaya nokokuzithokozisa abasisekelayo.
Lubanzi kangakanani lolu Hlelo?
I-Airbnb China Host Protection Plan isebenza ekubhukheni nasekuzithokoziseni okuse-mainland China (ngaphandle kwase-Hong Kong (SAR), e-Macau (SAR), nase-Taiwan). I-China Host Property Insurance isebenza ekubhukheni okungakhanseliwe nokuhlaliwe ubusuku obungaphezu kobubodwa e-Chinese mainland. Zonke izinkinga ezidinga ikhava yomshwalense ezibangelwa ukuhlala kwesivakashi ekhaya noma ekubambeni iqhaza ekuzithokoziseni phakathi nenkathi yokubhukha zingakhavwa yi-China Host Protection Insurance ne-China Experience Protection Insurance (kusukela ngo-August 1, 2021).
Ababungazi bamakhaya noma bokokuzithokozisa basithumela kanjani isimangalo somshwalense?
Faka isimangalo ngokumelene nesivakashi sakho usebenzisa inkundla noma [faka isimangalo](/umshwalense/faka isimangalo?reservation_locale=cn) nge-PICC ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemva kwengozi. Sicela ukhumbuze isivakashi sakho noma umbambi-qhaza wokokuzithokozisa ukuba akhulume nawe ngokushesha futhi anikeze umbiko ngesigameko.
Uma impahla yangaphakathi yekhaya lakho yonakele, yenze ukuba ihlolwe esayithini ngokushesha.
Kubalulekile ukuthi uqoqe ngokushesha ubufakazi obuningi ngangokunokwenzeka, njengezithombe noma amavidiyo, noma izitifiketi zophenyo lwamaphoyisa, ukuze uzokwazi ukuhambisa imininingwane eyanele yokusekela lapho ufaka isimangalo sakho.
Thatha izinyathelo ezisheshayo ngemva kwengozi: shayela i-hotline ethi 110, 120, noma 119 ukuze uthole usizo olusheshayo.
Ungazisingatha kanjani izingqinamba ezihlobene nezimangalo zomshwalense?
Ungaxhumana neqembu lamasevisi ezimangalo le-Marsh ukuze uthole imininingwane ethe xaxa mayelana nesivikelo usebenzisa i-imeyili CN.Airbnb@marsh.com noma ushaye ucingo ku-400 622 8012, ngamahora esevisi kusuka ngo-9:30 kuya ku-17:30 phakathi nezinsuku zeviki. Ukuthi ingavikeleka yini ngomshwalense kuzonqunywa ngobuchwepheshe yi-PICC ngokuya ngezimangalo ezithile. Ikheli le-imeyili le-PICC lithi airbnbclaim@piccsh.com, UCINGO luthi 021-95518 (Kubasebenzisi abangebona abaseShanghai, kufanele ushaye ikhodi yendawo ethi 021 kuqala; siza wazise izisebenzi zesevisi ukuthi ungumbungazi noma uyisivakashi se-Airbnb), futhi ucingo lwesevisi luvuliwe amahora angu-7×24; Ngamaholide, irekhodi yevisi yamakhasimende izothunyelwa eqenjini elikhethekile lesicelo sosizo ukuze liphroseswe, futhi lizokuphendula ngokuqondile.
Iluhlobo luni lwenkampani yomshwalense i-PICC?
Njengomlingani "Wohlelo Lomshwalense Wombungazi waseChina", i-PICC iyinkampani kahulumeni yomshwalense wezindlu enomlando omude futhi enokudlondlobala okukhulu eChina. Iqhuba uxhaxha lwamabhizini ngesikhundla esisezingeni eliphezulu siyisiqondiso semakethe yomshwalense wezindlu emhlabeni jikelele.